Firenena 10 ambony indrindra manana medaly olympika kely indrindra aty Afrika 2022 - Victor Mochere
Ny Lalao Olaimpika na ny Lalao Olaimpika dia mitarika hetsika ara-panatanjahantena iraisam-pirenena misy fifaninanana fanatanjahantena fahavaratra sy ririnina izay atleta an'arivony avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no mandray anjara amin'ny fifaninanana isan-karazany. Ny Lalao Olaimpika dia heverina ho fifaninanana fanatanjahan-tena lehibe indrindra manerantany miaraka amin'ny firenena rehetra mandray anjara. Ny Lalao Olaimpika dia matetika atao isaky ny efa-taona, mifandimby ny Lalao Olaimpika amin'ny fahavaratra sy ririnina isaky ny roa taona ao anatin'ny efa-taona.
Ny Lalao Winter dia mankalaza ny talentan'ireo atleta miaraka amin'ny fahaiza-manao momba ny fanatanjahan-tena amin'ny andro mangatsiaka, toy ny ski sy ny snowboard. Ny Lalao fahavaratra dia tanterahina amin'ny andro mafana, noho izany ny fanatanjahan-tena toy ny volley volley sy ny làlambe dia ny fanatanjahantena mahazatra deraina mandritra ny Lalao fahavaratra. Medaly olaimpika iray no atolotra an'ireo mpifaninana mahomby amin'ny iray amin'ireo Lalao Olaimpika. Misy kilasy medaly telo: volamena, natolotra ny mpandresy; volafotsy, natolotra ny hazakazaka; ary ny varahina, nomena ny laharana fahatelo.
Ireto ny firenena 10 voalohany manana medaly Lalao Olympika kely indrindra eto Afrika.
Maninona ny fampivoarana tranokala manokana no fomba tsara indrindra ho an'ny marikao